Wafti ka Socda Xukuumadda oo Gaadhay Magaalada Laascaanood
Laascaanood (Dawan)- Waftida ka socda golaha wasiirada ee xukuumadda Somaliland oo ay ka mid yihiin Wasiirada arrimaha gudaha, Maxamed Kaahin Axmed, horumarinta biyaha, Saleebaan Yuusuf Cali koore, hawlaha guud Cabdirashiid Ducaale Qambi, xidhiidhka golayaasha iyo dastuurka qaranka Maxamed Aadan iyo Wasiir ku xigeenka warfaafinta Maxamed Muuse Abees ayaa gaadhay magaalada Laascanood ee xarunta gobolka Sool.
Socdaalka waftigan ayaa ujeedadiisu tahay arrimaha nabadaynta beelaha Walaalaha ah ee ku dagaalamay koonfurta gobolka Sool, Sida uu warbaahinta u sheegay guddoomiyaha gobolka Sool Cabdirashiid Xuseen Carab.
Guddoomiyaha gobolka Sool isaga oo arrimahaasi ka hadlayayna waxa uu yidhi “Waxa yimid wafti ka socda xukuumadda oo ka koobaan shan wasiir oo uu hoggaaminaayo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha, waxa ka soo horreeyey saddex iyo toban xildhibaan oo golaha guurtida ah. Dhammaan waxa ay u socdaa mashaqadii dhibka badnayd ee ka dhacday koonfurta gobolka Sool.”
Guddoomiyaha gobolka Sool ayaa sheegay in xukuumaddu cudud iyo caqligaba ay ku dayeyso xal u helida shaqaaqada ka taagan koonfurta gobolka Sool, waxana uu yidhi “Xukuumaddu xooga ayey saaraysaa hadday tahay ciidan, dhaqan iyo guurti ahaan ba. Waftigan ugu soo horeeyeen ayaa jooga hadda, Laascanood ayaa talo lagaga gaadhay qaabka ay xukuumaddu u galayso qorshe ahaan.”
Guddoomiyaha gobolka Sool Cabdirashiid Xuseen Carab ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay warar ay baahiyeen qaar ka mid ah warbaahinta gobolka Sool oo sheegayey in dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ay shir nabadayn ah gobolka ugu qabanayaan beelaha ku dagaalamay koonfurta gobolka Sool, waxaanu yidhi “Laba shir ma jiraan, madaxweynaha Somaliland ayaa ku baaqay cid kasta oo si nasteex ah u gelaysa hawshaa oo Soomaali ah, waan ku soo dhawaynayaa waana ballantii madaxweynaha annaguna taasi ayaanu ka shaqaynayaa cidkasta oo aan siyaasadaynayn oo si wanaag ah u gelaysa waan ku soo dhawaynayaa.”